सिरिन्ज आक्रमणमा फसेका पाठक भन्छन्- म होइन भन्दै थिएँ, भीडमा कुरा सुन्ने कोही थिएन, 'त्यत्रो भीडमा म एक्लो थिएँ,' | Jukson
सोमबार धुलिखेल अस्पतालमा बिरामी आफन्त भेट्न हिँडेका पाठक बीचबाटोमै एक महिलालाई 'सिरिन्ज आक्रमण' गरेको आरोपमा मुछिए।
पाठकले काभ्रे प्रहरीसमक्ष आफूलाई निर्दोष साबित गराउन एक दिन पूरापूर संघर्ष गर्नुपर्‍यो। अन्तत : मंगलबार प्रहरीले उनलाई निर्दोष भन्दै 'सम्मानपूर्वक' छाडेको छ।
कसरी भयो यो घटनारु निर्दोष पाठक कसरी मुछिए ?
उनी काठमाडौं आएको तीन साता भएको थियो। वालिङ'१३, खानीडाँडाको श्री सरस्वती उच्च माविमा पढाइरहेका पाठक लोकसेवाको प्रारम्भिक सहायक पदका लागि जाँच दिन असार ६ गते काठमाडौं आएका थिए।
बनेपामा केही समय गाडी रोकियो। यात्रु चढ्ने-ओर्लिने क्रम जारी थियो। उनी बसेको सिटअगाडि एक जना युवती थिइन्। ती युवतीसँगै एक जना महिला पनि थिइन्। उनीहरूबीच केही अगाडिदेखि काठमाडौंमा पछिल्लो समय हल्ला चलेको 'सिरिन्ज आक्रमण' बारे कुराकानी भइरहेको थियो।
‘ती महिला को थिइन् थाहा भएन, न युवतीकै विषयमा मलाई थाहा भयो,’ पाठकले भने, ‘अचानक त्यही कुरा चलिरहँदा मलाई युवतीले सिरिन्ज घोचेको आरोप लगाउनुभयो।’
'त्यत्रो भीडमा म एक्लो थिएँ,' पाठकले भने, 'त्यहाँ मेरो कुरा सुन्ने कोही थिएन।
त्यसपछि पाठकले कानुनी परिबन्ध झेल्न थाले। उनीमाथि सोधपुछ सुरू भयो। 'किन सिरिन्ज हानेको' भन्दै एकोहोरो प्रश्न गरियो।
'मैले होइन, होइन भनेर प्रतिवाद गरिरहेँ, तर प्रहरीले छाडेन। ती युवती पनि प्रहरी कार्यालयमै थिइन्। उनले यही मान्छे हो भनेर किटान गरिन्,' पाठकले भने, 'उनले बिनासित्ति किन त्यस्तो आरोप लगाइन् भनेर म आश्चर्यमा थिएँ, त्यसमाथि सिरिन्ज भनेपछि प्रहरीले केरकार गर्न थाल्यो।'
यति हुँदाहुँदै प्रहरी समयमै आइपुगेकाले ‘भीडको शिकार हुनबाट जोगिएको' उनी बताउँछन्।
'म के उद्देश्यले हिँडेको थिएँ, बाटोमा अर्कै भयो। न मैले आफन्त भेट्न पाएँ, न कसैको सहानुभूति पाएँ। मलाई सिरिन्ज आक्रमणकारी भनी मिडियामा समाचार आएछ, असाध्यै दुख लाग्यो,’ उनले भने।
पाठक कसरी निर्दोष सावित भए त ?
प्रहरीले सिरिन्ज प्रहार भएर नभएको यकिन गर्न ती युवतीलाई शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु पठाइएको थियो। अस्पतालले जाँच गरेर सिरिन्ज प्रहार नभएको यकिन गरेपछि प्रहरीले पाठकलाई सम्मानपूर्वक रिहा गरेको हो।
‘कसैमाथि आरोप लाग्यो भन्दैमा हामीले उहाँमाथि गैरकानुनी तवरले कारबाही गर्न हुँदैन, हामीले यो धर्म निर्वाह गरेका छौं,’ सापकोटाले भने, ‘निर्दोष व्यक्तिलाई स(सम्मान रिहा गरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्‍यौं।’
ती युवतीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने टेकुका डा। शेरबहादुर पुनका अनुसार उनको शरीरमा सिरिन्ज घोचिएको दाग भेटाउन सकिएन। उनको रगत परीक्षण भने गरिएको छ।
साभार : सेटोपाटी
‘क्याप्टेन’ देशैभर हाउसफूल